I-China I-infrared Thermopile isivamvo soMlinganiso woBushushu obungenakunxibelelana STP9CF55 abenzi kunye nabathengisi Ilanga
I-STP9CF55 ye-infrared thermopile sensor yemilinganiselo yeqondo lobushushu elingahambelaniyo ne-thermopile sensor ukuba namandla ombane ophuma ngokuthe ngqo kulandelelwano lwesehlo se-infrared (IR) samandla emitha. Enkosi kwi
I-STP9CF55 equka uhlobo olutsha lwe-CMOS ye-thermopile sensor chip ebonisa uvakalelo olufanelekileyo, ubushushu obuncinci bokulingana kwemvakalelo kunye nokuzala okuphezulu kunye nokuthembeka. Ukuchaneka okuphezulu Isalathiso se-thermistor chip sikwadityanisiwe kwimbuyekezo yeqondo lobushushu.
Ukukhanya kwelanga okuphezulu kobuntununtunu be-thermopile sensors ziyafumaneka kwi-TO-46, TO-5 kunye ne-compact SMD housings. Ziyahluka ngokobungakanani bendawo yoluvo kunye nohlobo lwezindlu. Ngoluhlu lwee-sensors eziyilelwe ngokukodwa. Ukukhanya kwelanga kubonelela ngezisombululo zethemometri (ulwakhiwo lwe-Isothermal), imilinganiselo engeyiyo yonxibelelwano (iilensi ezakhelweyo) okanye ukuJongwa kweGesi (iiwindow ezimbini ezinqamlezileyo, iziphumo zomjelo omibini). Ingqondo yethu ekhethekileyo ye-ISOthermal sensor yahlula kakhulu usapho lwe-Sunshine ye-thermopile ngokusebenzisa ulwakhiwo olunelungelo elilodwa lomenzi ukunikezela ukusebenza okuphuculweyo kunye nokuchaneka komlinganiso phantsi kweemeko zothusayo lobushushu.
Iimpawu zoMbane (TA = + 25 ℃, ngaphandle kokuba kuchaziwe ngenye indlela.)
Egqithileyo Uyilo olukhethekileyo loMfanekiso woBushushu boMzimba-MSA Ubushushu obungenakunxibelelana Ukulinganisa Imodyuli yeSensor yeSensor yeNkqubo yokuFikelela kuFikelelo-Ilanga
Okulandelayo: Ukuchaneka okuphezulu kwe-infrared Thermopile isivamvo soMlinganiso woBushushu ongadibaniyo STP9CF55H
Precision High infrared Thermopile woluvo for N ...
Infrared Ubushushu Ubhaqo Non-contac ...